Asalka iyo codsiga Zeolite
Zeolite waa macdan dabiici ah oo ay soo saarto dambaska foolkaanada oo ku dhaca ilaha biyaha alkaline iyo cadaadis sanado badan ka hor. Isku-darka cadaadiskaan wuxuu keenayaa Zeolite inuu sameeyo qaab-dhismeed tetrahedral silica-oxygen ah oo leh qaab malab leh oo leh daloolo. Waa mid ka mid ah macdanaha dhifka ah ee leh natur ...
Isticmaalka zeolite ee warshadaha dhismaha dhismaha
Sababtoo ah culeyska khafiifka ah ee zeolite, macdanta zeolite dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay qalab dhisme boqolaal sano. Waqtigan xaadirka ah, zeolite waa nooc cusub oo ah agab bey'adda u fiican, warshaduhu waxay ogaadeen faa'iidooyinka adeegsiga zeolite tayo sare leh/daahirsan si loo soo saaro qiimo-ku-daray ...
Cusboonaysiinta tiknoolajiyada perlite ayaa ka dhigaysa hirgelinta dhismaha cagaaran mid dhab ah
dhismaha cagaaran waa dhisme nooc cusub ah oo aan sannado badan u doodaynay laakiin aan la hirgelin. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in baaritaanka qalabka dhismaha uu yahay geedi socod joogto ah. Isbeddelkii ugu dambeeyay ee tikniyoolajiyadda wax soo saarka ee perlite waa isbeddelka ilaha dabka aan lahayn ...